Liyintoni ikamva lokuqokelelwa kwedatha? | Martech Zone
NgoLwesibini, Novemba 3, 2015 NgoLwesithathu, Novemba 4, 2015 Douglas Karr
Nangona abathengi kunye nabathengisi ngokufanayo bekhankanya Ukuqokelelwa kwedatha njengomthombo okhulayo wokuqonda kwabathengi, malunga nesibini kwisithathu bathi ngekhe basebenzise idatha yekwiminyaka emibini ukusukela ngoku. Ukufunyanwa kuvela kuphando olutsha olwenziwe GfK kunye neZiko loPhando lwaMazwe ngaMazwe (IIR) phakathi kwabaxumi kunye nabanikezeli ngeenkonzo abangaphezulu kwama-700.
Yintoni ingqokelela yedatha?
Ukuqokelelwa kwedatha okwenzekileyo kukuqokelelwa kwedatha yabathengi ngokuziphatha kwabo kunye nokunxibelelana ngaphandle kokwazisa okanye ukucela imvume yomthengi. Ngapha koko, uninzi lwabathengi aluqondi nokuba ingakanani idatha ebanjiweyo, nokuba isetyenziswa okanye kwabelwana ngayo.
Imizekelo yokuqokelelwa kwedatha ngumkhangeli okanye isixhobo esiphathwayo esishicilela indawo okuyo. Nangona unokuba ucofe ulungile xa ubuzwa okokuqala ukuba oovimba abanokukujonga na, isixhobo sisirekhoda indawo yakho ukusuka apho ukuya phambili.
Njengokuba abathengi bedinwa yimfihlo yabo kusetyenziswa ngeendlela abangakhange bazicinge, ukuthintela iintengiso kunye nokukhetha ukubrawuza kwangasese kuya kusiba ngakumbi nangakumbi. Ngapha koko, iMozilla isandula ukubhengeza ukuba iFirefox iyomeleze indlela yayo yokukhangela yabucala ngo ukuvimba abaqhubi beqela lesithathu. Oku kunokuba kukugcina phambili kwimigaqo karhulumente- ejonge ukukhusela abathengi kunye nedatha yabo ngakumbi nangakumbi.
Iziphumo ezivela Ikamva lokuqonda ikwatyhila ukuba:
Umda kuhlahlo-lwabiwo mali kwaye baya kuhlala bengumba ophambili wombutho kubaxhasi nabanikezeli ngeenkonzo; kodwa ezinye izinto ezixhalabisayo- ukusuka kudityaniso lwedatha ukuya kwinkxalabo yolawulo- zibonwa ziphantse zilingana ngokubaluleka.
Bamalunga nesithandathu kwabalishumi abaxumi kunye nabanikezeli ngeempahla abathi bazakwenza uphando usebenzisa ii -apps zeselfowuni kunye / okanye iibrawuza eziselfowuni Kwiminyaka emibini ukusukela ngoku - kunye nabathengisi kunokwenzeka ukuba bathi sele beyenza.
Ukukhawuleza kokuveliswa kokuqonda ukuze kuchaphazele izigqibo zeshishini ikwabonwa njengesithuba esibalulekileyo kushishino namhlanje, inqaku lesibini phakathi kwabaxumi (i-17%) kunye neyesithathu phakathi kwabanikezeli (15%).
Malunga nesinye kwisithathu sabamkeli bathe ezona ndlela zabo zibalulekileyo zokuqokelela idatha kwiminyaka emibini ukusukela ngoku iya kuba yingqokelela yedatha nje nangona isibini kwisithathu singenzi nto namhlanje. Isibini kwisithathu seenkampani zophando zentengiso azilindelanga ukuba zenze ingqokelela yedatha nje kwiminyaka emibini.
Ukuqokelelwa kweDatha nje: Ngaba kulungile okanye kubi?
Ukuze abathengisi bayeke ukuphazamisa kwaye baqale ukwabelana ngokubhekiselele kubathengi, abathengisi kufuneka babambe idatha. Idatha kufuneka ichaneke ngokungaqhelekanga kwaye ifumaneke ngexesha lokwenyani. Ukuchaneka kubonelelwa ngokuqinisekisa idatha ukusuka kwimithombo eliqela. Ixesha lokwenyani alizukwenzeka ngophando okanye ngabantu besithathu… kufuneka yenzeke ngaxeshanye nokuziphatha kwabathengi.
Mhlawumbi abathengisi bazizisele ngokwabo- ukuqokelela i-terabytes yedatha kubathengi, kodwa bangaze bayisebenzise ngobuchule ukubonelela ngamava angcono omsebenzisi. Abathengi bayondliwa, baziva nje besetyenzisiwe kwaye bexhatshazwa njengoko idatha yabo ithengwa, ithengiswa kwaye kwabelwane ngayo phakathi kweetoni zemithombo yokugaxela ubumdaka kubo.
Uloyiko lwam kukuba, ngaphandle kokuqokelelwa kwedatha, iindonga ziqala ukunyuka. Amashishini awayi kufuna ukubeka umxholo wasimahla, izixhobo kunye neeapps ukonyusa amava abathengi kuba abanakho ukubhikica nayiphi na idatha enokusebenziseka kuyo. Ngaba ngenene sifuna ukuya kwelo cala? Andiqinisekanga ukuba senza… kodwa andikabeki tyala kwinkcaso.
tags: gfkIIRIziko loPhando lwaMazwe ngaMazweuphando lwemakethiIdatha engenziwangaUkuqokelelwa kwedathaumlinganisoZophando
Abathengi bakhetha ukukhetha kunye nokunxibelelana… nokuba uneVidiyo